Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Ma dhalinyarada leedahay shahwada hiddo ahaan daciif?” waxaa qoray Hannah Devlin, Wariyaha sayniska, ee theguardian.com on Wednesday 18-February 2015 06.01 UTC
Wiilasha kubada hore u heystaan ​​inay ka welwelaan: baro, gabdho iyo baaxadda ay "wax", sida Adrian Mole ayaa ku rid laga yaabaa. Ma dhibaatada haysata shahwada qaan-hiddo ahaan daciif runtii u baahan tahay in lagu daro liiska this?
Seynisyahanno at the University of Cambridge ay soo jeediyeen ay taasi dhacdo ka dib waddaa baadhitaan ah oo ku lug leh in ka badan yahay 24,000 waalidiinta iyo caruurtooda. Falanqaynta diiradda lagu saaray kala duwanaanta hidde yaryar oo u dhexeeya waalidiinta iyo farcankii, kuwaasoo lagu qiyaasayo in la keena qalad kaga dayanayaan in unugyada ukunta ama manida.
Baadhitaanka ayaa muujiyay, in, celcelis, Aabayaalkiin gudbin ugu yaraan lix jeer sida ugu badan ee Isbedelo si ay caruurtooda sida hooyooyinka. Tani waxay soo jeedinaysaa DNA shahwada waa taranka yar aamin ku ah saleynayo hidde aabaha, Waxay u badan tahay sababtoo ah unugyada manida lagu sameeyay kala qaybsanaan badan ku unugyada ugxanta dumarka ah ay markii ugu rimidda dhacaa.
The dalab ka badan duwanyihiin - oo mid ka mid ah in helay dareenka ugu - waa in heerka qaladka in unugyada manida wiilasha teenage ku saabsan yahay 30% ka badan yahay in dhalinyarada.
Cilmi baadhayaashu waxay sheegaan inuu noo sharxi kartaa reer Aabayaalkiin teenage halista dheeraadka ah ee xanuunada sida autism, schizophrenia iyo Spina bifida-.
Author Wargeyska ayaa, Peter Forster, sheegay: "Carruurta wiilasha 15-sano jir ah ay leeyihiin oo ku saabsan 30% Isbedelo badan oo reer nin oo dhallinyaro ah. Waa qaybinta J-qaabeeya ah. "
Tani turjumay si halis ah cilladaha lagu dhasho ee ku saabsan 2% wiilasha oo dhowr iyo toban jirka, marka la barbar dhigo halista ah celceliska 1.5%, ayuu yiri.
Forster yiri: "Waxa ay noqon kartaa in nidaamka soo saarista shahwada oo dhan waa baadi sii nugul ee bilowga ah ... in ay kaliya weli ma filaayo."
Waxa uu sheegay in aragti ahna xataa waxay keeneen in fikradda, by wariye kale, in haddii wiilasha teenage ka badan masturbated, waxay u dhawdahay inay in ay ka shaqeeyaan oo ay maraan jidkii awood u marayo mudada "suboptimal" dheeraad ah oo degdeg ah.
Ka hor dhallinyarada digtoon soo jeedin this (ma ay horeba uga sooco, wax badan oo ka mid ah waqti ay hawshani?), waxaa qiimo leh oo lagu arkay warqada lafteeda, ee Royal Society Journal Tallaabooyinka B.
Waxa cajiib ah ay tahay maqnaashaha dhamaystiran oo qalooca J-NRC. Halkan garaafka, taas oo u eg xariiq toosan ii.
Heerarka isbedel ayaa STR Germline ee aabayaasha iyo hooyooyinka. Sawir: Dacwadaha ee Society Royal ah
Waa run in dhibic xogta wiilasha oo dhowr iyo toban jirka ayaa laga yaabaa in ay muujiyaan tiro waxyar sareeya ee Isbedelo badan in u 20- oo qeexaya da'ada 30-sano, laakiin waxa ay weli u muuqda in uu daboolaa la 95% kalsoonida bareeg u arrimuhu toosan. Waxaan arki karin sabab kasta in lagu gabagabeeyo in "unugyada wax dhala wiilasha dhallinyarada waa ka reebban xeerkan gaboobay", sida qorayaasha ka qaban.
Haddii aad socdeen si ay u dhaadhaca wadada in, waxa kale oo aad la yaabi laga yaabaa sababta ay shahwadu aado waxoogaa dano at 30, laakiin ka dibna mar kale soo kabanayso la imaanka da'da dhexe, sababta oo ah waxaa u muuqataa in kororka ah ee 30-35 category. Sharaxaad A sahlan tahay in xogta ay tahay oo keliya waxoogaa buuq badan.
Allan orod badan, professor of andrology at the University of Sheffield, Oo Ogolaaday: "Tani macno ma i. Ma u aragtaa xidhiidhka J-qaabeeya ah iyo, marka la eego bayoolaji, Uma maleynayo karaa wax u sharxi doono. "
Forster tilmaamay, in baadhitaanno badan oo dadka, taas oo u dirayeen aabayaalkiin teenage waxaa laga yaabaa in ay u badan tahay in ay carruurta xanuunada kala duwan. Laakiin way adag tahay in la yidhaahdo haddii natiijooyinka sida ay ku xiran tahay sababaha hidde toos ah ama arrimo bulsho iyo deegaanka. Aniga ahaan, this studydoes dambeeyay aan samayn wax badan in lagu xalliyo arrinta. Sida orod badan geliya: "Ma arko walaac kasta oo weyn marka aabaha dhallinyarnimada."
Kuwa wiilasha teenage kuwaas oo aan marka aabaha, ay jiraan sababo badan tahay oo kale in ay sugaan illaa 20 si ay u koraan aabanimada.
← Post Previous Sony SmartWatch 3 Quick Review [VIDEO] →